Chinese Customer Care Coordinator (Negotiable)
Good Brothers' Co., Ltd IT, Hardware, & Software
Coordinator (Customer Care)
- No experiences in related field
- Must have Chinese Language skill
- Must be able to answer customer call
- Must be able to explain service call
- Interpreting customer requirements
- Good communications with customers
- Persuading clients that service will best satisfy their needs
- Following up customer complains submitted clients
- Prepare weekly & monthly reports to Manager
Computer Expert (၂) ဦး (Negotiable)
ကွန်ပျူတာ ကျွမ်းကျင် စွာ အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
Microsoft word, excel အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
email, internet, facebook အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
မြန်မာဖောင့် (zawgyi, unicode) အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
အဖွဲ့ အစည်းနှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။
၁ ပတ် ၆ ရက် လုပ်နိုင်ရမည်။
Marketingကိုစိတ်ဝင်စားပြီး အလှကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဈေးကွက်အတွင်း ကျွမ်းကျင်စွာရောင်းချနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Logistics Associate (Negotiable)
Logistics Associate ကျား(၁) ဦး
၁၀ တန်းအောင်(သို့မဟုတ်) ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။
အသက် (၂၅) နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။
Sales & Marketing (Cosmetic) (Negotiable)
Sales & Marketing (Cosmetic)
Delivery Assistant (Negotiable)
Mega Lifescience (Medical practice)
Customer များမှ မှာယူသော ပစ္စည်းအော်ဒါများအား သက်ဆိုင်ရာအရောင်းဆိုင်များသို့ လိုက်လံပို့ဆောင်ရမည်။
ရောင်းရငွေများအား ကောက်ခံသိမ်းဆည်းပြီး ရုံးသို့ အပ်နှံရမည်။
ငွေကြေး ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး စာရင်းဇယား ပြုလုပ်နိုင်ရမည်။
အထက်လူကြီးမှ ပေးအပ်သော လုပ်ငန်းတာဝန်များအား ထမ်းဆောင်ရမည်။
ဘွဲ့ရ (သို့) အခြေခံပညာ အထက်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
ကျန်းမာ ကြံ့ခိုင်ပြီး အဖွဲ့အစည်းနှင့် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။
SKG & RGP Co., Ltd. IT, Hardware, & Software
Minbu Solar Power Plant Project တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် လုံခြုံရေး ၀န်ထမ်းများ အလိုရှိပါသည် ။
- နေ့/ည တာဝန်ချိန် ကို အလှည့်ကျဆင်းနိုင်ရမည် ။
-မိမိတာဝန်ချိန်တွင် နိုးကြား တက်ကြွစွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည် ။
-အရပ် အနည်းဆုံး ၅ပေ ၄လက်မ ရှိရမည် ။
-လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်း လျှောက်ထားနိုင်သည် ။
-အရက်သေစာ သောက်စားသူမဖြစ်ရပါ ။
-မကွေးတိုင်း မင်းဘူးမြို့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည် ။(နေ/စား ငြိမ်း)
ှComputer Expert (ကွန်ပြူတာ ကျွမ်းကျင်) (၂) ဦး (Negotiable)
Microsoft Word ကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး Internet Website များကို စိတ်ဝင်စားသူ (၂) ဦး အလိုရှိသည်။
အတွက်အချက်ကောင်း၊ မျက်စိလျင်၊ design အမြင်ရှိ၊ စေ့စပ်သေချာပြီး အချက်အလက်စုဆောင်းနိုင်ရမည်။
1. Quality Control for Registration
BD ဌာန မှ account ဖွင့်ပေးသော Customer များ၏ အချက်အလက်များ အားလုံးကို တိတိကျကျ စစ်ဆေးရမည်။ Follow up call ခေါ်ပေးရမည်။ iMyanmarHouse.com အကြောင်းနှင့် ကြော်ငြာတင်နည်းအား နားလည်ခြင်း ရှိ မရှိ မေးရမည်။ Account ၁ ခုစီတိုင်း နှင့် ကြော်ငြာ ၁ ခုစီတိုင်းတွင် လိုအပ်ချက်များ ရှိပါက ဖြည့်စွက်ရန် ပြောရမည်။ မိမိကိုယ်တိုင် Sign up လုပ်သော customer များကို ဆက်သွယ်ပြီး အကျိုးဆောင်၊ ပိုင်ရှင် စသည့် အမျိုးအစားများအား ပြန်ခွဲပေးရမည်။ အကျိုးဆောင်များဖြစ်ပါက BD ဌာန နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ဆောင်ရွက်ရမည်။ ကြော်ငြာမတင်သော customer များအား ကြော်ငြာတင်ရန် တိုက်တွန်းရမည်။
2.Answering Phone Call
Website တွင် ကြော်ငြာတင်လိုသော user call များကို ဖြေကြားပေးပြီး ကြော်ငြာတင်နည်း ရှင်းပြပေးရမည်။ ကြော်ငြာ တင်နည်း ၂ မျိုး ကို ရှင်းပြပေးရမည်။ မိမိ မဖြေနိုင်သော အကြောင်းအရာများကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာနသို့လွှဲပြောင်းချိတ်ဆက်ပေးရမည်။
Contact Support System မှ ၀င်လာသော အကြောင်းအရာများ အားလုံးကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး လုပ်ဆောင်ပေးရမည်။ Post Management : ရောင်း၊ ငှား ကြော်ငြာများ စစ်ဆေးပေးရမည်။ Homepage Special Post များ စစ်ဆေးပေးရမည်။ Pending Post များကို Edit လုပ်ပြီး approve လုပ်ပေးရမည်။ Banner Add Management: Banner နှင့် Logo များ အသစ်ရှိပါက တင်ပေးရမည်။ edit လုပ်ပေးရမည်။
4. English Version
Agencies, Constructions, Transportation, and Renovation များ အား Translator မှ ဘာသာပြန်ထားသည်များကို English Version အတွက် Dashboard မှတဆင့် ပုံနှင့်တကွ ထည့်သွင်းပေးရမည်။ Property Event, Property Interview, Property Guide များအား Translator မှ ဘာသာပြန်ထားသည်များကို English Version အတွက် Dashboard မှတဆင့် ပုံနှင့်တကွ ထည့်သွင်းပေးရမည်။
5. Unexpected Project
လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ ပေါ်ပေါက်လာသော အရာများ၊ ညွှန်ကြားချက်များအား ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ (ဥပမာ - ကြော်ငြာတင်ခြင်း၊ post တင်ခြင်း၊ဓါတ်ပုံပြုပြင်ခြင်း)
Office Staff (Negotiable)
Online Business (Internet)
Customer service အတွက် page, viber, message,ဖုန်း, ဖြင့် အကြောင်းပြန်ရမည်
customer များနှင့် စာရိုက်/ဖုန်းပြော သည့်အခါ ယဉ်ကျေးပျူငှာစွာ ပြောဆိုတတ်ရမည်
အလုပ်ချိန် မနက်9နာရီမှ ညနေ5နာရီ အထိ
(လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သည့်အခါ ညဂျူတီ ဆင်းနိုင်လျှင်ပိုကောင်းသည်)
အစမ်းခန့် ၁ လ
ခန့်မှန်းလစာနှင့် အတူ ကိုယ်ရေးရာဇ၀င်အကျဉ်း၊ မှတ်ပုံတင်၊ ဘွှဲ့လက်မှတ်၊
ရပ်ရွာ/ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ၊ ရဲစခန်းထောက်ခံစာ၊ အိမ်ထောင်စုဇယား များ ပူးတွဲပြီး အလုပ်လျှောက်နိုင်သည်။
ဘွဲ့  ရ
computer basic (အဓိက မြန်မာစာရိုက်တတ်ရမည်)
customer များနှင့် ယဉ်ကျေးပျူငှာစွာပြောဆိုနိုင်ရမည်
အလုပ်မှ ချမှတ်ထားသောစည်းကမ်းများကို တိကျစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်
ပညာရေးကင်းရှင်းပြီး၊ အိမ်ထောင်မရှိသူ အပျိုဖြစ်ရမည်
အသက် 20 မှ 30 နှစ် ကြား
Interview ပြီးလျှင် အလုပ် အမြန်ဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်
Senior Accountant (Part Time) (Negotiable)
Hsu Latt Kaung Co.,Ltd (Information technology and services)
အသက် ၂၃ မှ ၃၀ နှစ်အတွင်း
LCCI Level (III) အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
Yangon Pan-Pacific Int'l Co.,Ltd. (Textiles)
Any degree holder with very good English4skill & Age 22 to 30
Able to use,MS Words 2007,Excel 2007 ,E-mail and Fax
Healthy, Good personality,communication & reporting Beginner
Must Have experience over (1)years
Graphic Designer (Negotiable)
Create design for company profile, logo design, layout plan design and other
Create 2D/ 3D dimension structure of event and building.
Design backdrop, billboard, flyer, web page banner, stands for event and shows
Update website information, design and photo.
Develop and design collateral items across platforms in print, digital and experiential formats.
Create internal and external communications materials, ranging from social media posts, event graphics, presentation decks and reports, marketing collateral, to swag merchandise.
Collaborate with the team’s graphic designers, photographers and copywriter on concept development and design.
Accept other responsibilities as allocated by superior.
1 to 3-year experience in related field
Experience asacreative designer
Good communication skills and team work with the member
Proficiency in relevant industry tools: Adobe Creative Suite (InDesign, Illustrator, Photoshop). Experience with After Effects isaplus.
Outstanding interpersonal skills. The ability to work well onateam as well as cross-team.
Ability to work within timelines and budget while producing accurate and high-quality work.
Familiarity in web development (html/css, programming)aplus.
EMPS International School IT, Hardware, & Software
ဗဟန်းမြို့နယ်တွင် တည်ရှိသောEMPS Group of Schools တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် Graphic Designer ကျား/ မ (၂) ဦး အလိုရှိသည်။
(Job Requirement )
- အသက်(၂၂) မှ (၃၅) အတွင်းရှိသူဖြစ်ရမည် ။
- မည့်သည့်ဘွဲ့ရမဆို လျှောက်ထားနိုင်သည်။
- Graphic Designer သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်ရှိသူများကိုဦးစားပေးမည်။
- မိမိအရင်ဖန်တီးခဲ့ဖူးသော Design များ (အရင်အလုပ်မှဖြစ်စေ၊ သင်တန်းမှ လေ့ကျင့်ခန်းများဖြစ်စေ စုစည်းထားသော Portfolio များကို တင်ပြနိုင်သူအား ဦးစားပေးစဉ်းစားပေးမည်။
ကျောင်းမှ လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ ၊ သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းများနှင့် အခြား မားကတ်ဒ်တင်း အတွက်လိုအပ်သော စာစောင်များ၏ ဒီဇိုင်းများကို ပုံဖော်ပေးရမည် ဖြစ်သည်။
ကျောင်း Website များအတွက် လိုအပ်သော ဓာတ်ပုံများရိုက်ပေးခြင်း၊ Video များရိုက်ပေးခြင်း တည်းဖြတ်ပေးခြင်း နှင့် ဒီဇိုင်းများ ကို ပြင်ဆင်ပေးရန် ။
ရုံးချိန်မှာ မနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီခွဲထိဖြစ်သည်။
ပိတ်ရက် စနေနေ့ (သို့) တနင်္ဂနွေ နှင့်အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်
Trade Staff/ Executive (Negotiable)
Advanced Medical & Diagnostics Trading Ltd (Myanmar) (Import and export)
Import license processing include border license and
T T processing
Number of Vacant: 1
Age: between 25~30
Education: Any Graduated
Other Qualification: Computer, English4skills and Email
Working Experience:3year experiences in trade field
Monday to Friday (8:30 AM to 5:15 PM)
Saturday (8:30 AM to 12:30 PM)
Sunday and Gazetted Holidays are Off
Ferry, Join and experience team, Have an opportunities, Yearly Bonus
General Myanmar State Assessment (Construction)
General Myanmar State Assessment
• Apply computers for database management or word processing and other number of applications.
• Process, maintain, and enter information into databases.
• Manage proper system for paper or electronic filing, keeping recording information, filing paperwork, or maintaining documents, such as attendance records, correspondence, or other material.
• Able to handle office equipment, such as fax machines, copiers, or phone systems and organize for repairs when equipment malfunctions.
- Requirements: minimum2year working experience in the Construction/ Building/ Architecture field.
- Bachelor graduated
- Familiar with Microsoft word, excel, ppt etc..
- Excellent English skill: sometime need to translate (Myanmar to English, English to Myanmar)
-Professional Leadership with Quality Service
-Learn new skills on job
General Myanmar State Assessment Co., ltd, founded in Yangon in 2017, provides comprehensive professional services of assessment for the whole country.
With long-term professional accumulation,
GMSA has establishedastrong evaluation information data platform andasenior professional and technical team to provide property evaluation, project evaluation, feasibility study, land bidding, real estate investment consultation and diversified professional evaluation services.
Head Of Commercial Strategy (Negotiable)
Seagram Myanmar Company Limited (Food & beverages)
Asakey support and deputy to the Sales Director, the Head of Commercial Strategy takes the full responsibility of developing the commercial strategy of Seagram Myanmar, designing and implementing of sales, tools and techniques across the organization, coordinating sales programs with the regional branches, marketing and trade marketing, with an overall objective to support sales target achievement and company’s commercial development
1. Develop Commercial Strategy
• Develop market insight through frequent interactions with sales branches and trade partners
• Drive market monitoring and collection of market intelligence, competitors’ performance and strategy
• Support Sales Director to develop channel strategies, effective wholesale contracts, trade programs and trade investment guidelines
2. Deploy Commercial Policy
• Liaison with Branches, Manufacturing, Marketing and Finance to drive prompt actions to meet and exceed sales revenue and profitability targets.
• Build clear and precise field implementation and branch operational guidelines to ensure sales branches have sufficient operational guidance
• Createawinning atmosphere by effectively communicating the sales cycle plan, channel strategy and vision to all branches throughout the sales channel
• Lead MIS team to manage sales forecasting, planning, reporting and budgeting processes with high levels of accuracy and consistency
• Remove structure deficiencies and createarobust communication structure to ensure prompt and sharp program implementation to capture market opportunity and growth
4. Contracts, Pricing and Trade terms
• Analyze price positions and recommend most appropriate price strategy, including profitability assessment. Work closely with the branches to developarobust plan to takeasubstantial price increase based on market analysis and dynamics
• Assess trade terms structure and contract policies, propose changes/ adjustments based on the local legal evolutions and commercial policies
5. Organization development and change management
• Build high performance teams to drive organizational performance; strong focus on people leadership and development of functional talent
• Bea“Change Agent”, drive transformation and change through the development and implementation of people strategies that enable the organization to thrive
• Degree holder with formal business qualifications or equivalent
• Minimum 10 years working experience in Sales in beverages or FMCG
• Organized and strong result orientation, agile with numbers, critical thinking and autonomy
• Entrepreneurial mindset and proactive; energetic and outgoing personality
• A team player with excellent interpersonal and communication skills
- World No. (2) production and distribution company for wine and spirits
အချိန်ပိုင်း ဆီဖြည့်ဝန်ထမ်း (Filling Attendant) (Negotiable)
Max Energy (Oil & energy)
၁။ အလုပ်ဝင်ချိန် တိကျမှန်ကန်ရမည်။
၃။အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး စိတ်ပါဝင်စားစွာပူးပေါင်းဆောင် ရွက် ရမည်။
၄။ တာဝန်ချိန်တွင် သတ်မှတ်ယူနီဖောင်းအား သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာဝတ်ဆင်၍ ချိုသာရွှင်ပြစွာ ဆက်ဆံ ဆောင်ရွက် ရမည်။
၅။ တာဝန်ချိန်အတွင်း ဆိုင်အတွင်း၌ ဆေးလိပ်၊ အရက်သောက်စားခြင်း၊ ကွမ်းစားခြင်း မပြုလုပ်ရ။
အသက် ၁၈ ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
တက္ကသိုလ် တက်ရောက်နေဆဲ Day ကျောင်းသား/သူ ဖြစ်ရမည်။
Computer အခြေခံ အသုံးပြုတတ်သူဖြစ်ရမည်။
Meal + Uniform
Senior Shipping Supervisor (Negotiable)
EMC Manufacturing Limited (Consumer goods)
Job related with cargo booking
Documentation & system usage
Communication with service providers & customers
Other shipping related tasks assigned by manager
1~3years experienced in shipping and logistics field; preferable in manufacturing field;
Good Command in English and Myanmar4Skills;
Must be able to work in Mingalardon Industrial Park;
Any Fresh Graduate.
Aged between 18 & above years old.
Knowledge in Human Resource Policies & Procedures.
Good Communication & Teamwork Skill.
Must be able to Microsoft Office, Computer Literate, Internet & Email.
Admin Assistant (Male - 1 Post) (Negotiable)
Concordia International Co.,Ltd (Medical equipment)
Liaise with executive and senior administrative assistants to handle requests and queriesfrom senior managers
Proven2years experience as an Administrative assistant or Office admin assistant